Ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny endrika kely
“Jesosy dia naka an’i Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehany Izy, ka ny tavany namirapiratra tahaka ny masoandro, ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava” Mat. 17:1,2
Nitehin-ko hariva ny andro raha niantso telo tamin’ireo mpianany mba hanatona Azy i jesosy, Petera sy Jaona ary Jakoba, ary nitarika azy ireo hamakivaky ireo saha, ary tamin’ny fiafaran’ny lalan-dratsy iray, ho any an-tehezan-tendrombohitra (...)
Somary nihataka kely tamin’izy ireo, ilay lehilahy zatra fahoriana dia nandraraka n fitalahoany tamin’ny tomany sy antsoantso mahery vaika. Nangataka tanjaka mba hiaretana ny fitsapana noho ny amin’ny olombelona Izy. Ary noloarany ny hetahetan’ny fony ho an’ireo mpianany, mba tsy hahalevona ny finoan’izy ireo ao amin’ny oran’ny herin’ny maizina (...)
Ankehitriny ny zavatra nibahana tao amin’ny fivavahany dia ny mba hanomezana azy ireo ny fanehoana ny voninahitra izay niarahany nanana tamin’ny Ray talohan’ny niandohan’izao tontolo izao, ka ny Fanjakany dia haseho ho hitan’ny mason’olombelona, ary hohatanjahina ireo mpianany amin’ny fahitana izany. Nitalaho Izy mba hahafahan’izy ireo mijoro ho vavolombelona ny amin’ny fanehoana ny maha-Andriamanitra Azy izay hampahery azy ireo mandritra ny oran’ny fahoriany mafy indrindra miaraka amin’ny fahalalana fa Izy tokoa no zanak’Andriamanitra ary ny fahafatesany mahamenatra dia ao anatin’ny drafi-panavotana.
Nohenoina ny fivavahany. Raha niankohoka ambany teo amin’ny tany vatoina izy, dia nisokatra tampoka ny lanitra, nivoha nidanadana ireo vavahady volamenan’ny tanànan’Andriamanitra, ary nisy tara-pahazavana masina nidina nankeo amin’ny tendrombohitra, ary nandrakotra ny bikan’ny Mpamonjy. Ny maha-Andriamanitra tao anatin’izany dia nanjelanjelatra tamin’ny alalan’ny taranak’olombelona, ka nihaona tamin’ny voninahitra avy any ambony. Niarina avy ao amin’ny fiankohofany, nijro tamin’ny fiandrianan’Andriamanitra i Kristy. Lasa ilay fanahy ory. Ny endriny dia namirapiratra “toy ny masoandro” ankehitriny, ary ny fitafiany dia “fotsy tahaka ny hazavana”.
Ireo mpianatra, nifoha, nahatsikaritra ity fitosahan’ny voninaihtra izay nanazava ny tendrombohitra. Tao anatin’ny tahotra sy ny fahagagana no nibanjinan’izy ireo ny endrika mamirapiratry ny Tompon’izy ireo. Nisy zava-manan’aina avy tany an-danitra roa teo anilany, izay niresaka niaraka taminy. I Mosesy, izay niresaka tamin’Andriamanitra tao an-tendrombohitra Sinay, sy i elia, izay nomena ny tombontsoa ambony no teo. Tsy ho eo ambanin’ny herin’ny fahafatesana intsony . Teo na-tendrombohitra no nanehoana tamin’ny endrika kely ny Fanjakan’ny voninahitra izay hoa vy- i Kristy ilay Mpanjaka, i Mosesy no solontenan’ireo olo-masina natsangana, ary i Elia ireo izay novana.